Airbus: fiaramanidina vaovao 39,000, mpanamory vaovao 550,000 ilaina amin'ny 2040
Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » Airbus: fiaramanidina vaovao 39,000, mpanamory vaovao 550,000 ilaina amin'ny 2040
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • fampiasam-bola • Vaovao • People • tompon'andraikitra • News sustainability • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny fisotroan-drononon'ny fiaramanidina efa antitra mba hanafaingana, mitaky tsikelikely kokoa noho ny fanoloana, manohana ny tanjona decarbonization ny indostria.
Hitombo hatrany ny fitakiana fitaterana an'habakabaka, tarihin'ny harinkarena faobe, ny fiakaran'ny saranga antonony ary ny faniriana hikaroka sy hifandray.
Ny fanatsarana tsy tapaka amin'ny fahombiazan'ny fiaramanidina, ny solika maharitra, ny fampandehanana ary ny teknolojian'ny fanosehana dia ahafahan'ny sehatra 2050 net-zero tanjona.
Mila mpanamory vaovao 550,000 mahery ary teknisianina mahay 710,000 mahery ao anatin'ny 20 taona manaraka.
Tao anatin'ny 20 taona manaraka, Airbus vinavinaina fa mitaky ny fitaterana an'habakabaka mba hiova tsikelikely avy amin'ny fitomboan'ny fiaramanidina mankany amin'ny fisotroan-dronono haingana amin'ny fiaramanidina efa antitra sy tsy misy solika, ka mila fiaramanidina mpandeha sy mpitatitra entana vaovao 39,000 eo ho eo, 15,250 amin'ireo ho soloina. Vokatr'izany, amin'ny taona 2040, ny ankamaroan'ny fiaramanidina ara-barotra miasa dia ho taranaka farany, niakatra avy amin'ny 13% amin'izao fotoana izao, manatsara ny fahombiazan'ny CO2 amin'ny fiaramanidina ara-barotra manerantany. Ny tombony ara-toekarena amin'ny sidina dia miitatra mihoatra ny sehatra, mitondra manodidina ny 4% amin'ny harin-karena maneran-tany isan-taona ary manohana asa 90 tapitrisa eo ho eo eran'izao tontolo izao.
Raha very efa ho roa taona ny fitomboana nandritra ny vanim-potoanan'ny COVID, ny fifamoivoizana mpandeha dia naneho ny faharetany ary natao hifandray indray amin'ny fitomboana isan-taona 3.9% isan-taona, tarihin'ny fanitarana ny toekarena sy ny varotra manerana an'izao tontolo izao, anisan'izany ny fizahantany. Ny saranga antonony, izay azo inoana fa hanidina, dia hitombo ny isan'ny olona roa lavitrisa ka hatramin'ny 63% amin'ny mponina eran-tany. Ny fitomboan'ny fifamoivoizana haingana indrindra dia any Azia ary i Shina ao an-toerana no lasa tsena lehibe indrindra.
Ny fangatahana fiaramanidina vaovao dia ahitana fiaramanidina kely manodidina ny 29,700 toa ny A220 sy A320 Families, ary koa ny 5,300 eo amin'ny sokajy fiaramanidina Medium toy ny A321XLR sy ny A330neo. Ao amin'ny fizarana lehibe, voarakotry ny A350, mila fanaterana 4,000 eo ho eo no andrasana amin'ny 2040.
Fitakiana karatra, tosika amin'ny e-varotra, dia tarihin'ny fitomboana andrasana amin'ny entam-barotra 4.7% isan-taona ary ny entana ankapobeny (misolo tena ny 75% amin'ny tsena) fitomboana 2.7%. Amin’ny ankapobeny, mandritra ny 20 taona ho avy, dia hilana entana 2,440 880 eo ho eo, ka ny XNUMX amin’ireo no haorina vaovao.
Mifanaraka amin'ny fitomboana, ny fampandehanana fiaramanidina mahomby kokoa maneran-tany dia mampitombo ny filana serivisy fiaramanidina ara-barotra - ao anatin'izany ny fikojakojana, fanofanana, fanavaozana, fampandehanana sidina, fandravana ary fanodinana. Ity fitomboana ity dia mandeha amin'ny Airbus' Ny haavon'ny vinavina mialoha ny areti-mifindra dia mahatratra sanda mitambatra manodidina ny $4.8Tn ao anatin'ny 20 taona manaraka. Raha mbola mitohy ny fihenan'ny 20% mifandraika amin'ny COVID nandritra ny vanim-potoana 2020-2025, dia miverina indray ny tsenan'ny serivisy, ka mila mpanamory vaovao 550,000+ sy teknisianina mahay 710,000+ ao anatin'ny 20 taona manaraka. Na dia mijanona ho sehatra serivisy lehibe aza ny fikojakojana, ny sidina, ny asa an-tanety ary ny serivisy maharitra dia antenaina hitombo be ihany koa.
“Rehefa matotra ny toekarena sy ny fitaterana an'habakabaka, dia hitanay fa mitombo ny fangatahana noho ny fanoloana fa tsy ny fitomboana. Ny fanoloana no mpamily manan-danja indrindra amin'ny decarbonization. Manantena ny sidina maharitra kokoa izao tontolo izao ary ho tanteraka ao anatin'ny fotoana fohy izany amin'ny alàlan'ny fampidirana ny ankamaroan'ny fiaramanidina maoderina, ”hoy i Christian Scherer, Lehiben'ny varotra sy lehiben'ny Airbus iraisam-pirenena. "Ny fampandehanana ireo fiaramanidina vaovao sy mahomby ireo miaraka amin'ny Sustainable Aviation Fuels (SAF) no fitaovana lehibe manaraka. Mirehareha izahay fa ny fiaramanidina rehetra - ny A220, ny A320neo Family, ny A330neo ary ny A350 - dia efa voamarina fa hanidina miaraka amin'ny fifangaroan'ny 50% SAF, napetraka hiakatra ho 100% amin'ny 2030 - alohan'ny hahatonga ny ZEROe ho zava-misy manaraka amin'ny 2035. mandroso.”
Ny indostrian'ny fiaramanidina eran-tany dia efa nahazo tombony goavana, araka ny asehon'ny fihenan'ny 53% amin'ny entona CO2 manerantany hatramin'ny taona 1990. Ny vokatra avy amin'ny Airbus dia manohana farafahakeliny 20% amin'ny fahombiazan'ny CO2 raha oharina amin'ny fiaramanidina teo aloha. Raha jerena ny fanavaozana mitohy, ny fivoaran'ny vokatra, ny fanatsarana ny fiasa ary ny safidy mifototra amin'ny tsena, Airbus dia manohana ny tanjon'ny sehatry ny fitaterana an'habakabaka hahatratra ny entona karbônina aotra amin'ny taona 2050.